प्रधानमन्त्रीलाई थाहा छैन ! कसले चलाउँदै छ सरकार ?
सागर चन्द काठमाडौं, २६ असार
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतबाट आउने फलफूल र तरकारीमा रहेको विषादी परीक्षण रोकिएको प्रकरणमा आफूलाई झुक्याइएको बताए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय लागू नगर्न भारतीय दूतावासले पठाएको पत्र लुकाएर आफूलाई झुक्याइएको बताएका हुन् ।
यसअघि नेकपाका अध्यक्षसमेत रहेका ओलीले पार्टीको बैठकमा भारतबाट आएको पत्रको प्रसंग आउँदा हल्लाको पछि नलाग्न भन्दै पार्टीका नेतालाई हप्काएका थिए । भारतले पठाएको पत्र सञ्चार माध्यममा सार्वजनिक भएपछि भने प्रधानमन्त्रीले पत्रबारे आफूलाई जानकारी नदिएर भुक्काइएको बताएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री ओली झुक्किएको यो पहिलोपटक होइन । उनले यसअघि चिनी उद्योगीले पनि आफूलाई झुक्याएको बताएका थिए ।
चिनी उद्योगीले झुक्याएको बताएको केही समयपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुक्याएको बताएका थिए ।
दुई तिहाइ शक्तिसहितका प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने शक्ति उनको पार्टीभित्र छ या कर्मचारी संयन्त्रमा ? अहिले आमसर्वसाधारण अन्योलमा छन् । यी त प्रधानमन्त्रीले आफू झुक्किएको थाहा पाएका घटना हुन्, प्रधानमन्त्रीले थाहै नपाएर झुक्किएको घटना झन् कति होलान् ?
मन्त्रालय र मन्त्रीको कार्यसम्पादनबारे मन्त्रीसँग नभई सचिवसँग ब्रिफिङ लिने प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रालयका हरेक कामको विवरण खोज्छन् । तर पनि उनलाई झुक्याउन कसरी सफल हुन्छ मन्त्रालय ?
आइफा अवार्डदेखि सडक निर्माणसम्मको विषयमा ब्रिफिङ लिने प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यकक्षमा 'वार रुम' नामक एउटा ठूलो ब्रिफिङ कक्ष पनि छ । जहाँबाट प्रधानमन्त्रीले देशभरका आयोजना हेर्न र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्न सक्छन् । तर पनि प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याइन्छ ।
प्रहरीले केही समयअघि कविद्वय संगीत श्रोता र रसुवाली कविलाई पक्राउ गर्यो । पक्राउ गरेपछि प्रहरीले भन्यो, ‘झुक्किएर पक्राउ गर्‍याैं ।’
प्रधानमन्त्री ओलीसँगै उनको संयन्त्र पनि बारम्बार झुक्किरहन्छ ।
गुठी विधेयक फिर्ता लिएको समाचार पनि प्रधानमन्त्रीले सञ्चार माध्यमबाट थाहा पाएको बताएका थिए । आफ्नै नेतृत्वको सरकारभित्र हुँदै गरेका काम–कारबाहीसँग समेत बेखबर हुने गरी प्रधानमन्त्रीको दायरा साँघुरिँदै गएको अनुभूति हुन थालको छ ।
राज्यका महत्त्वपूर्ण निकाय मानिने सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता अनुसन्धानात्मक कार्यालय नै आफू मातहत राखेका प्रधानमन्त्री आफ्नै सरकारका काम कारबाहीबारे बेखर हुनु लज्जास्पद हो ।
प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याउँदै प्रधानमन्त्रीको सूचना स्रोत साँघुरो बनाएर कसले सरकार चलाउँदै छ ? आफ्नै सरकारका क्रियाकलापको खबर प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्दै नपुग्ने हुन्छ ? कि प्रधानमन्त्री सूचना सुन्नै चाहँदैनन् ? प्रधानमन्त्रीसम्म सूचना नै नपुग्ने हुन भने कसलाई पुर्‍याइन्छ सूचना ?
प्रधानमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने यस्तो संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीसँगै देशको साख पनि गिराउँदै गएको छ । देशका कुन–कुन संवेदनशील विषयमा आफूलाई झुक्याएर देशहितविपरीत निर्णय भइसकेको प्रधानमन्त्रीले केही समयपछि मात्र थाहा पाए भने के होला ?
शक्तिशाली भनिएका प्रधानमन्त्री नै यति सजिलै झुक्किने भएपछि उनको शक्ति कतै भ्रम मात्र त होइन भन्ने शंका पनि उब्जिएको छ । केही थाहा नपाउने प्रधानमन्त्रीलाई शक्तिको विम्ब बनाएर आफ्नाे दुनो सोझ्याउने लालचीले कतै भित्र–भित्रै देश बेच्ने प्रपञ्च त रचेका छैनन् ? चिया पसलमा समेत यस्तै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।
अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले बारम्बार आफूलाई झुक्याइएको भनेर जनताको सहानुभूति बटुल्न खोजेका त होइनन् भन्ने आशंका पनि छ । बारम्बार दुई तिहाइ शक्तिको दुहाइ दिने प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई झुक्याइएको भन्दै उम्किन पाउने ठाउँ पनि छैन । उनलाई झुक्किने छुट छैन ।
प्रधानमन्त्री ओली निकट संयन्त्रले प्रधानमन्त्री र सरकारको असफलता लुकाउन प्रधानमन्त्री झुक्किएको कहानी रचेका पनि हुन सक्छन् । झुक्किएको बहाना बनाउँदै प्रधानमन्त्री र सरकारलाई सहानुभूति दिलाउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री संयन्त्र लागेको हो कि ?
स्मरण रहोस्, प्रधानमन्त्री ओली सामान्य विषयमा झुक्किएका होइनन् । मुलुकको स्वार्थ, राजस्व र कूटनीतिक सम्बन्ध जोडिएका गम्भीर विषयमा झुक्किएका हुन् । भोलि कुनै दिन प्रधानमन्त्रीले देशको अस्मिता र स्वाधीनता गुमाउने विषयमा हस्ताक्षर गरेर भन्लान्, ‘मलाई झुक्याइयो ।’ के यो सह्य होला ?
त्यसैले, हिलाम्य मैदानमा रातो कार्पेट ओछ्याएर चौर भन्दै झुक्याइन्छ भने यो झुक्याउनेभन्दा झुक्किनेको कमजोरी हो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, असार २७, २०७६, ०२:१८:००